Ego ole ka ọ na-eri iji nweta ụlọ nwere Apple HomeKit? | Esi m mac
Apple banyere ụwa nke ngwa ngwa ụlọ, yana ngwaahịa a maara dị ka Ngwa ụlọ. Companylọ ọrụ ahụ mepụtara ngwanrọ nkwado maka ndị na-emepụta ihe ụlọ iji gbanwee ngwaahịa ha ka ọ kwekọọ na HomeKit. Nsonaazụ kwesịrị ịbụ na: ihe mkpuchi, oriọna, ntụ oyi ma ọ bụ stovu, n'etiti ndị ọzọ, meghachi omume na ntuziaka anyị nyere ha site na ngwa HomeKit, arụnyere na ngwaahịa Apple. Taa enwere ike ịnye iwu site na ngwaọrụ iOS, Apple TV na Apple Watch. Na Mac anyị enweghị ya n'oge a, mana anyị nwere olile anya ịnwe ya na nsụgharị ndị ọzọ dị ka ngwa ngwa ma ọ bụ site na isoro Siri na-akpakọrịta.
N'oge a ọ bụ naanị na US mana anyị amatala na enwere ụlọ ọrụ na-ewu ụlọ, - KB Homelọ, nke na-ewuli ụlọ gị ka ịmegharị ya na HomeKit ma jiri atụmatụ ya niile rụọ ọrụ.
Ha na-enye dịka ọmụmaatụ, mmejuputa nke HomeKit n'otu ụlọ dị na San José, USA constructionlọ ọrụ na-ewu ụlọ na-enye atụmatụ atọ. Ha na-amalite site na a Nhazi usoro nke na-efu € 2.500. Companylọ ọrụ ahụ na-enye onye nwe ya Apple TV na iPad iji jikwaa nwụnye, ma nye njikọta kachasị na onye ahịa, na-enwe ike ijikwa ụlọ n'ime ya yana n'èzí. Site na ego a, anyị nwere ike itinye mgbakwunye na njiri mara ndị a: mkpọchi, ọkụ, isi, ugo ụlọ, stovu na ngwa ndị ọzọ.
Anyị na-achọta ndị ọrụ chọrọ ya niile, ya mere, ọmụmụ ihe na-adịbeghị anya na-egosi nke ahụ ụlọ 100% nke Homekit na-achịkwa, ga-efu ihe dịka $ 4000 na $ 4400. Ọ bụ ọnụahịa dị oke ọnụ, mana dị ka itinye ego n'ụlọ, ọ bụ mgbakwunye nke ọtụtụ ga-adị njikere ị nweta.
KB ụlọ, nwere asọmpi siri ike. WeberHaus ga-amalite ịnapụta nhọrọ nchịkọta ọhụrụ m na-ahapụ ka ha dinara n'ụlọ ha na ụlọ. Ọ ga-etinyekwa mgbakwunye mba a na ụlọ ndị a rụpụtara arụpụtara na mba European Union. Mmezu nke usoro ndị a ga-abata na njedebe nke afọ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Esi m mac » Apple » Noticias » Ego ole ka ọ na-eri iji nweta ụlọ nwere Apple HomeKit?
Oké ọhịa Apple na-adịgide adịgide na-amalite ịkwụ ụgwọ